श्रीलंकाजस्तो आर्थिक संकट आउने सम्भावना उन्मुख नेपाल – Ratopati News
Ratopati News२४ चैत्र २०७८, बिहीबार १०:१७
–पत्रकार सुमन श्रेष्ठ
श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाट पल्टिए सँगै नेपालमा पनि पछिल्लो समय अर्थ संकट खतराको ठुलो चर्चा चुलिदैँ गएको छ । देशमा अर्थ संकटको चर्चा चुलिएसँगै दोषारोपणको क्रम पनि उकालो लागेको छ । को दोषी छ नेपालमा अर्थतन्त्र डामाडोल पार्नमा ? सरकार कि जनता ? कसरी आयो नेपालमा पनि आर्थिक संकटको खतरा ?
गत असार मसान्तमा आइपुग्दा सम्म १० महिनालाई पुग्ने बस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने अमेरिकी डलर थियो नेपालमा तर त्यो अहिले खस्किएर ६ महिनालाई पनि पुगनपुग को अवस्था छ । जबकि विश्व मौद्रिक नीतिका अनुसार कम्तिमा ७ महिनासम्मलाई धान्ने अवस्थालाई सामान्य मान्ने गरेको छ ।
यस्तो हुनुमा हामी नेपालीहरुले खर्च गरेको बिलासिताको सामान र बिदेशी ब्राण्ड प्रतिको मोह प्रमुख कारण हो । नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार नेपालीहरुले गाडी देखि सारीसम्म, दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न दाल, चामल, मकै, गहु, कोदो, खाने तेल लगायतका सामानसम्म बिदेशी भुमीबाट आयात हुदैँ आएको छ । लगाउने लुगा, महंगा गाडी, मोटरसाइकल, लगायतका यातायातका साधन, महंगा मदिरा, बिदेशी ब्राण्डका सजावटका सामान लगायतका सामानको खरिद पनि यसको प्रमुख कारण हो ।
नेपालको आफ्नो उत्पादन नहुनु र आफुसँग भएको बिदेशी डलरलाई विदेशबाट नै आयात हुने विभिन्न ठाउँमा खर्च गर्नु नै नेपालमा अर्थ संकट खतराको प्रमुख कारण हो । अर्थविद्हरु नेपालमा अहिले देखियको महंगी पनि नेपालसँग विदेशी मुद्राको कमि हुँदै गएकोले एकातिर अर्थतन्त्र ह«ास हुने र अर्कोतर्फ आयात व्यापक रुपमा बढ्ने समस्याका कारणले नै भएको बताउँछन । अर्थ जानकारहरुले मुलुकमा आर्थिक संकट आउँदैछ भनेर सुरुदेखि नै सरकारलाई सचेत गराइएको बताएका छन् । चैत्र २२ गते मंगलबार राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो संकट नै आइसक्यो भनेर कठोर नीति लियो । संकटोन्मुखतर्फ अर्थतन्त्र गैरहेको बेला सरकारले समस्याको समाधानको लागि सरोकारवाला निकायसँग पहलकदमी लिनुपर्छ ।
अर्थविद्हरु भन्छन्, ‘एकातिर ऋण बढ्ने अनि अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र रसातलमा गैरहने र ठूलो समस्या आउने खतरा छ । अब समस्या समाधानको लागि बृहत्तर रूपमा हुनुपर्नेमा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । विदेशी सहायतको उपभोग गर्ने क्षमताको वृद्धि गर्नुपर्छ । अनुउत्पादक खर्चलाई घटाउनुपर्छ । फजुल खर्च तत्काल कटाउनुपर्छ । स्पेशल पन्ण्ड क्रियट गर्नुपर्छ । त्यो पैसा जहाँ समस्या छ, त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ । एक्सचेन्ज रेट पोलिसीलाई रिभ्यु गर्नुपर्छ । ठोस कार्ययोजना र कार्यान्वयनको नीति पनि बनाउनुपर्छ । विस्तृत कार्ययोजना बनाएर एक्सनमा गैहाल्नुपर्छ । महासंकटमा पुग्नबाट जोगिनुपर्छ ।’
हाम्रो नेपाल पनि अर्थतन्त्र कोभिडले असर पारेको अर्थतन्त्र हो । अझ बढि प्रताडित नहोस भनेर बेलैमा हामीले सोच्नुपर्छ । श्रीलंकाजस्तो संकट आउने सम्भावना आउँदै गर्दा सरकारबाट उपेक्षा गरियो भने श्रीलंकाजस्तो समस्या आउँछ । यो कुराको महसुस गरेर हामीले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । यदि नेपाल सरकार र नेपाली जनता बेलैमा सचेत नहुने हो भने अबको केही महिनामा नै नेपाल पनि श्रीलंकाको हालतमा पुग्ने निश्चित रहेको जानकारहरु वताउँछन् ।
१ कार्तिक २०७७, शनिबार ०१:५९
कोभिडका १९ बेला रक्तदानको महत्व अझ बढी छ : सभामुख सापकोटा
२३ मंसिर २०७७, मंगलवार १२:०२
१ कार्तिक २०७७, शनिबार ०२:०२
२८ फाल्गुन २०७८, शनिबार ११:०६